Hanti-dhowrka Maxkamadda Hanti-dhowrka, Yavuz Sultan Selim iyo dhismaha XadarX Çanakkale ee 1915, haddii aan la saxin dhammaadka muddada qandaraaska, waxay khilaafsan tahay sharciga oo ay sabab u tahay waqtiyada dhismaha iyo dakhliga maalinlaha ah wuxuu dammaanad qaadayaa in luminta daqliga dadweynaha. [More ...]
Is-Qorshaha Qorshaha Gadiidka ee Javuz Sultan Selim Bridge
Global, Centricus Group Istanbul 3. Sida laga soo xigtay ilo ku dhow mawduuca, Global Investment Holdings Inc., Xarunta fadhigeedu yahay London ee Centricus Asset Management iyo koox iskaashato maalgashi oo Shiineys ah. [More ...]
Baabuurta Indigenous Banks
Ibraahim Burkay, Gudoomiyaha Gudiga Ganacsiga iyo Warshadaha ee Bursa (BTSO) ayaa yidhi, dik Waxaan samaynay dhamaan nooc kasta oo dadaallo ah si aan u soo saarno gaariga gudaha ee Bursa. Intaa kadib go’aanka [More ...]
Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya oo la kulmay Madaxweynaha iyo Ra'iisul Wasaare Cabdi Faarax Shirdoon
Duqa Silivri Özcan Işıklar, Duqa Magaalada Istanbul Mevlüt Uysal Silivri metrobus iyo Kiptaş ayaa ka faallooda mowduuca 'nasiibdarro' sida la qiimeeyay. Duqa Magaalada Silivri Özcan Işıklar, Dowladda Hoose ee Magaalada Istanbul [More ...]
Terminal Bus waxay u guureysaa Pendik
Baska dhex-dhexaadka ah ee 3. Saldhigga Harem Bus ee loo yaqaan 'Harem Bus Station' ayaa dib loogu raray Ataşehir sababtuna ahayd waajibka adeegsiga Buundada. Pendik Kurtköy, boosteejada baska cusub ee dhanka Anatolia ayaa la dhisi doonaa. 64 oo ay iska leedahay IMM gudaha Pendik Kurtköy halkaas oo Xarunta Harem Bus-ka loo rari doono [More ...]
Astaldi, 3. Bridge Bridge waa mid culus
Shirkadda dhismaha Talyaani ee Astaldi ee 3. Waxaa laga yaabaa inaad aragtay warka ah inuu iibin doono qaybtiisa Bridge. (Ganacsiga HT ayaa wariyey Bloomberg News.) Wargeysyada ayaa sidoo kale sheeganaya ”wararka, Astaldi iyo 3. Bridge saaxiibka weyn ee IC [More ...]
CHP leh Irgil Osmangazi, 3. Immisa Shaqaale Ayaa Ku Dhaca Biyaha, Eurasia iyo Marmaray
3 wuxuu u dhaqaaqay ajendaha Golaha. Mashaariicda kale oo lagu dhammeystirey ajendaha Golaha kadib eedeymo la xiriira nabadgelyo darrida shaqooyinka garoonka diyaaradaha iyo geerida qarsoon ee shaqaalaha. Kuxigeenka CHP Bursa Dr. Ceyhun İrgil, Shaqo iyo [More ...]
Viacom ee Turkey Nawaaxiga Production Base
buundooyinka yar Steel iyo buundooyinka sanadkii la soo saarka 30 Viacom ee sii wadaan in ay ka shaqeeyaan Europe, suuqa joogto ah u koraya si degdeg ah in Turkey. Turkey galeen suuqa heerka koritaanka sano 2014 17 boqolkiiba sanadkii la soo dhaafay, shirkadda [More ...]
2035 Target-ka Tareenka Tbilisi-Kars
Yüksel Coşkunyürek, Wasiir kuxigeenka Gaadiidka, Arimaha Badaha iyo Isgaarsiinta, ayaa yiri: gudaheeda Xilligaan xaadirka ah ee 1 milyan oo rakaab ah iyo xNUMX milyan oo tan oo xamuul ah oo xamuul ah oo Baku-Tbilisi-Kars Railway ayaa loo kordhin doonaa 6 milyan oo rakaab ah iyo 2035 milyan oo tan oo 3 ah. [More ...]
Crazy Premium Mashaariicda Mega!
Xallinta sameeyey ama mashaariicda dhismaha ka socda Turkey, saameeya qiimaha dhulka iyo guryaha ku wareegsan. Mashaariicda sida buundooyinka, wadooyinka waaweyn, gegooyinka diyaaradaha, tunelada iyo isgoysyada tuubooyinka waxay bixiyaan bedellada dhibaatooyinka gaadiidka. [More ...]
3. Helitaanka garoonka diyaaradaha!
Pınar Işık Ardor oo ka socda Wargeyska AKŞAM Newspaper ayaa weydiistey Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badda iyo Isgaarsiinta Ahmet Arslan, 29 Oktoobar 2018 3 in la qorsheeyay in la dhigo. Wuxuu ka jawaabey su’aalo la xiriira macluumaadka gaadiidka ee garoonka diyaaradaha. [More ...]
Raiiselwasaaraha 2017 wuxuu asaasay mashruuca tareenka ee Kars-Tbilisi-Baku bishii Oktoobar iyo 30 ayaa warka wanaagsan siiyay Edirne bishii Diseembar. Dadweynaha ayaa si xun u fahmay aragtida ah in mashruucyadan tareenka ay ku wajahan yihiin qaadista rakaabka. [More ...]
3. Maxkamadda Hagaajinta Guud
Darawalka iyo wadaha Buundada Yavuz Sultan Selim, oo la furay sanad ka hor iyada oo sheegashada ah in la isu keeno labada dhinacba ee Istanbul iyo in la yareeyo taraafikada illaa xad, waxay noqotay maxkamad. Nidaamka OGS iyo HGS [More ...]
Kanal Istanbul waxaa loo soo bandhigi doonaa dadweynaha
Madaxweyne Tayyip Erdoğan wuxuu dadweynaha ku dhawaaqay 2011 inuu yahay 'mashruuca qarnigii' inta lagu gudajiray Raiisul Wasaaraha iyo shaqooyinka shan waddo oo kala duwan oo loogu magac daray Channel Istanbul waxay cadaatay maalintii hore iyo wadada ku dhow garoonka diyaaradaha 3. [More ...]